१५ कठा जग्गामा नगरपालिका कार्यालय बनाउने निर्णय गरी सकेको छु -नगर प्रमुख गोपाल राय यादव, फतुहा विजयपुर
अन्तरवार्ता पटक पढिएको प्रेमचन्द्र झा क्रान्तिद्वार दैनिक
रौतहटको फतुहा विजयपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल राय यादवसंग क्रान्तिद्धार दैनिकका लागि सम्पादक प्रेमचन्द्र झाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
० नगरको विकास गतिविधि बारे यहाँलाई के के जानकारी प्रापत भएको छ ?
— हाम्रो नगर सभा २०७५ साल चैत्र २९ गते भयो । धेरै ढिल्लो भयो । जसका कारण विकास काममा समेत असर पर्न गयो । विकासका काम पनि ढिलो शुरु भयो । हाम्रो नगर पालिकामा ९० प्रतिशत जतिको काम सम्पन्न भई सकेका छन् ।
० कामको अनुगमन तथा निरषिणको लागि के विधि अपनाउनु भएको छ ?
— उपप्रमुख कान्ती देवी महतोको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएका छन । अनुगमनको प्राय जसो काम वहाँले नै गर्नु हुन्छ ।
बेलाबेलामा म स्वयं र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रन्जना साह, सहितको टोली बनाएर गाउँ गाउँमा गएर कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गर्दछु । पटक पटक गएर काम हेरीरहेको हुन्छौं ।
इन्जिनियरलाई समेत हामीले निर्देशकन दिईसकेका छौं की काम जतिको मात्र विलिगं गर्नका लागि कम झाको बढी विल नबनाउन समेत गराएको छ ।
० तपाईहरु योजना स्थलमा जाँदा कामको गुणस्तर कस्तो पाउनु भयो ?
— धेरै राम्रो कामहरु भईरहेको छ । कामबारे गुनासो छैन
० तपाईले हेर्नु भएको योजनाहरु मध्ये सब भन्दा राम्रो काम कहाँ देख्नु भयो ?
— हिमालीवासमा २४ लाख ५० हजार रुपैयाको लागतमा अदुवा खोलामा पुल बनेका छ न। खैरा टोलामा २४ लाख ५० हजारको लागतमा औरही खोलामा पुल बनेका छन ।
मौलापुर नगरपालिकाको मर्यादपुर देखि बारा जिल्लाको टेढाकटी सम्म ५ किलो मिटर बाटो बनाएको छु । हरेक वडा वडामा ढलान लगायतका धेरै राम्रा राम्रा विकासका काम भएका छन ।
० योजना संचालन गर्दा सुशासन, सदाचार र पारदर्शीतामा जोड दिनु नेपाल सरकारले भनेको छ । त्यसका लागि कुन विधि प्रकृया अपनाउनु भएको छ ?
— यसका लागि नगर सभा गर्नु भन्दा पहिले देखिनै । वडा भेला गरेर वडा वडाबाट योजना छनौट गरेका छौं । नगरसभाबाट पारित योजनाका हकमा गाउँवस्तीमा भेला गरी उपभोक्ता समिति पारदर्शी रुपमा गठन गर्न लगाएको छु । विकासको काममा समुदायसंग साझेदारी गरी सबैलाई जानकारी गराई विकास निर्माणको काम अगाडी बबढाएका छौं ।
० जिल्लाको अधिकास नगरपालिकामा नगरपरिषद सम्पन्न भई सक्यो । तपाईको फतुहा विजयपुरमा कहिले हुने हो ? कि फेरी चैत्र मै गर्ने प्लान गर्दे हुनु हुन्छ ?
— कार्यपालिका बैठक बसेर यही २०७६ आषार ३० गते नगरसभा गर्ने निर्णय गरी सकेका छौं ।
० नगर सभाबाट नगरमा गौरव गर्ने खालका कुन कुन योजना ल्याउने तयारी गर्नु भएकोछ ?
— वडा नम्बर एक देखि ६ सम्म मावि विद्यालय छैन । त्यसक ालागि सितलपुरमा मावि, क्याम्पस बनाउने योजना ल्याउन लागेका छौं ।
० नगरपालिकाको कामबाट जनता कतिको सन्तुष्ट छ ?
— नगर सभा पछि ामी काममा जुटेको अवस्था छ । अरु नपा भन्दा फतुहा विजयपुर नपामा धेरै विकास भएका छन । जनता खुशी ने छन जस्तो मलाई लाग्दछ ।
० जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता कतिको पुरा गर्न सक्नु भयो ?
— जनताबी भनेका धेरै काम गरी सके बाँकी कम गर्न तयार छु । सब भन्दा पहिले म माथि यहाँको जनताको आरोप थियो । नगर प्रमुख दक्षिण भेगका छन । नगरपालिका कार्यालय सारेर सितलपुर लै जान्छ । तर मैले विजयपुर बजारमा रहेको सहकारी संस्थाको १५ कठा जग्गामा नगरपालिका कार्यालय बनाउने निर्णय गरी सकेको छु ।
० जनतासंग के सहयोगको अपेक्षा ?
— जताको हरेक खेत खेतमा सिंचाईको लागि विद्यतुको काम गराउँछु । २ सय ५० वटा मोटर ३ सय स्प्रे टंकी किसानलाई वितरण गर्न गईरहेको छु ।
० नगरपालिकाको काममा कर्मचारीबाट तपाईले कतिको सहयोग पाई रहनु भएको छ ?
— नगरपालिकामा कर्मचारीको धेरै अभाव छ । ५६ वटा कर्मचारी चाहियो । तर आठ वटा कर्मचारीबाट काम चलिरहेको छ । कतिपटक संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गई सचिव ज्यूलाई भेटेर कर्मचारी पूतिका लागि आग्रह गर्दा समेत पुरा नभएको अवस्था छ । मेरो कार्यकालको दुई वर्ष पुरा हुन लाग्यो । कर्मचारी थप्नु त परै जाओस भएको कर्मचारी सरुवा भएर गएका छन । नयाँ कर्मचारी आएको छैन ।
० यहाँ भएको कर्मचारीले सहयोग गरेको छ ?
— सहयोग नभएको भए यति कामकाज कसरी हुन्थ्यो । थोरै कर्मचारी धेरै काम भ्याई नभ्याई अवस्था छ ।
० अन्तमा यो पत्रिका मार्फत के संदेश दिन चाहनु हुन्छ ?
— हाम्रो कार्यकालमा नगरका जनताले जे अपेक्षा गरेका छन । त्यो पुरा गर्नका लागि पूर्ण रुपले प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।
काम पुरा गर्ने हिसाबले लागेको जानकारी समेत दिन चाहन्छु । चुनावको बेला जनता बीच गरेका हरेक प्रतिबद्धता पुरा गर्न मैले लागि परेको छु ।
1485997	Times Visited.